किन बन्द भए हास्य टेलिश्रृंखलाहरु ? - Bharosa Media
किन बन्द भए हास्य टेलिश्रृंखलाहरु ?
Posted by: Yangzoom Tamang in Uncategorized August 31, 2018	909 Views
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने केही हास्य टेलिसिरियलहरु बन्द भएका छन् । भद्रगोल, मेरी बास्सै, जिरे खुर्सानी, ब्रैक फेल, तितो सत्य लगायतका टेलिसिरियलहरु बन्द भएका छन् ।
यी टेलिसिरियल मिडिया हबले उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर नेपाल टेलिभिजनसँगको सम्झौता सकिएका कारण सिरियलहरु बन्द भएको हो । नेपाल टेलिभिजनसँग तीन वर्षको सम्झौता गरेको मिडिया हबको सम्झौता सकिएपछि हास्य श्रृंखलाहरु बन्द भएका हो ।
एनटिभीको समयको मूल्य धेरै भएको कारण समस्यामा परेको जनाएको छ । उसले मूल्य घटाएमात्र उक्त समय खरिद गर्न आफूहरु तयार रहेको मिडिया हवले बताएको छ । मिडियाहबले टेलिफिल्म उत्पादक कलाकारहरुलाई रकम नदिएको भन्दै विवादसमेत हुने गरेको थियो । कलाकारहरु फिल्म निर्माणमा व्यस्त हुने गरेका कारण पनि टेलिभिजनमा सिरियल निर्माणमा चासो नदिएको कतिपयको आरोप छ ।
अन्य टेलिसिरियल भन्दा तितोसत्य टेलिसिरियल पहिले नै बन्द भएको थियो । उक्त टेलिफिल्ममा निर्माता निर्देशक दीपकराज गिरी र दिपाश्री निरौला फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले लामो समयदेखि बन्द रहेको तितोसत्य नामक टेलिफिल्म निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल टेलिभिजनसँग मिडिया हवको सम्झौता सकिएसँगै हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोलको टोली पनि फिल्म बनाउनतर्फ जुटेका छन् । यि कारणहरुले टेलिसिरियलहरु बन्द भएको हो ।
Previous: विमस्टेक सम्मेलनका लागि मर्मत गरिएको सडक हप्तादिन नबित्दै भत्किए
Next: मनपरी भाडा असुल गर्नेलाई कारवाही